Dai waiziva chipo chaMwari | Apg29
Vazhinji vanhu nhasi vanogara zvachose mukusaziva nezvaMwari uye upenyu waanobayira.
Rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri maererano neMwanakomana waMwari, Jesu akatora zvivi zvedu mutongo pamuchinjikwa. Mwari aitanga kutipa zvivi. Tinogona kuva nehana yakachena. Mwari anoda kuti musimbise rudo rwake kwatiri patinosarudza kutenda muna Jesu.
Kana iwe kuvimba naJesu, iwe uchava mwana waMwari. Mweya waMwari anoswedera mumoyo mako uye imi muzere rwaMwari. Jesu akafananidza nemvura mhenyu.
The mukadzi naJesu akataura pfungwa kuti aireva vanhuwo mvura. Akanga asina kunyange chipo chaMwari uye kuti ndiani akataura kwaari.
Mashoko ari muBhaibheri akanyorwa nevanhu, asi ivo vari mashoko akafuridzirwa naMwari. Mukadzi haana pakutanga, asi gare gare, uyo akanga achitaura naye. Kana iwe tora chikamu cheBhaibheri, nzwisisa kuti kana iwe tora chikamu shoko raMwari, kudenga napasi. Uye chipo hazvisi kuti unogona kuva kwaibva mukati mako. A mabviro vanoita zvakanaka uye asina anofambisa yakaoma. Zvadaro hamuzvidze pamusoro pano uye uko. Zvino vane chipo choupenyu mukati mako. Mweya waMwari anoda kugara newe. Anoda kukubatsira kurarama upenyu hwechiKristu. Zvakanaka. A chipo choupenyu, runyararo, rudo uye mufaro. All nekuda zvaitwa naJesu kwatiri kuburikidza norufu rwake uye kumuka. Izvi, shamwari yangu, izvozvo outclasses ino akatsemuka. Sin anorasikirwa kukumbira kwahwo paunosvika ravira chipo chaMwari.
How kugamuchira chipo chaMwari?